update University - Higher education abroad for international
tọrọ ntọala : 1973
Echefukwala discuss Ajou University
The akụkọ ihe mere eme nke Ajou University e jupụta na ịma aka ndị ọhụrụ: ọ bụghị nanị ohere ọhụrụ ókèala na Korea amụ na mahadum site ewebata ndị abụọ-ogo usoro na mba ọzọ mahadum na nke mbụ n'etiti Korean mahadum, ma ka toro dị ka otu n'ime ndị na-eduga na mahadum na naanị banyere ọgu arọ abua ebe ọ bụ na ya oruru.
ugbu a, Ajou adịla njikere-na ihe ọzọ ịma aka. Ọ na-arọ nrọ nke ya "Nke abụọ Establishment" iji tọọ ntọala maka ya otu narị afọ dị ka a na-eduga mahadum na-aghọ ku n'aka nke ezi isi nke anyị na otu.
Site quantitative ibu na a qualitative itu ukwu, anyị na-agba mbọ iji malite ọgbọ nke "Ajou Premium" na-agbanwe agbanwe ụwa n'aha Ajou dị ka ndị a:
mbụ, Update University ga na-ejide Onwe talent, onye-adọta mmasị ma ụmụ akwụkwọ onwe ha na ndị ọha mmadụ.
Ajou University ga ịkụnye ụmụ akwụkwọ na "Ike maka nlanarị" anyị asọmpi na otu ndị bụ isi nke ihe ọmụma na a siri ike mmụta na ha majors, na "Ike nke ibute ụzọ" nke mere na ha nwere ike ịhụ ihe ha chọrọ ma na-edozi nsogbu na ha onwe ha, na "Ike nke adabako ndụ" na nke ha nọ na-echebara ndị ọzọ na-akwanyere di iche iche.
Nke abụọ, Ajou University ga-eme ka anyị research-edu ndú na-edu otú ma academia na ụlọ ọrụ.
Update University Ga-achụso "Evolutional research" via creativity na convergence dabere na isi competencies na "Magburu onwe nnyocha" site ụda mpi na otutu ike usoro, na anyị ga-n'ịwa "Irè research"pụta via mmekota n'etiti industries, academia, research oru, na ọha na òtù.
Nke atọ, Ajou University ga imezu òkè anyị na ibu ọrụ maka ịgbanwe ọha mmadụ na-emeghe ọhụrụ oge.
Anyị ga-elekwasị anyị ike on "-Ewu na-elekọta mmadụ isi obodo" n'ihi na adabako ndụ, "Rụọ ọrụ na-elekọta mmadụ agagharị" nke na-enye ohere maka ndị mmadụ n'otu n'otu ime gaba n'iru dabeere ná mgbalị ndị ha, na "Akwadebe maka ịdị n'otu nke Koreas" na mgbakwunye na inyịme anyị zuru ụwa ọnụ.
Iji na-aghọta ọhụụ a, the people of Ajou University will begin three “Pleasant Innovations.”
Innovation bụ ngosipụta nke anyị kpebisie ike iji merie ma gbanwee ugbu a n'ezie, -eke n'ọdịnihu na anyị na-atụ anya. Ọ bụ ma ikwughachi ihe ndị anyị mere n'oge gara aga ma ọ bụ na-eso ụzọ ndị ọzọ emeela naanị ngwa ngwa. Ọ na-emeghe ọhụrụ ụzọ na anyị onwe anyị jiri ịnụ ọkụ n'obi.
ọ bụ ọhụrụ nke gburugburu ebe obibi iji creatively merie chere na nsogbu anyị; ọhụrụ nke onwe anyị, agbapụ si na-agbanwe agbanwe anyị gara aga ụzọ iche echiche na-arụ ọrụ, na ndị ọzọ na usoro maka anyị onwe anyị; na -elekọta mmadụ ọhụrụ n'ihi na emepe emepe anyị na otu na a ụda n'ụzọ gburugburu esemokwu na nkewa.
Ndị a bụ Pleasant na-enye obi uto innovations n'ihi na anyị bụ obi ụtọ ime ha, kama n'ịbụ onye a gwara na ndị ọzọ.
Ndị a obi ụtọ innovations site Ajou ndị ga-eduga obi ụtọ innovations ofụri ndị ọha mmadụ nke Republic of Korea.
Ọ bụrụ nweta nkwalite Shanghai, anyị na otu ga-agbanwe nke ọma. Obi ike a, Ọ dịghị mmachi anyị obi ike ebịne ịma aka ndị na-eche ihu anyị, na ịnụ ọkụ n'obi na otú anyị nrọ bụ adịghị agwụ agwụ.
Biko akwado obi ike nke na isonyere ndị agha maka Pleasant innovations site Ajou ndị.
update University, guzosie ike 1973 n'okpuru motto nke “Asia ji mma mahadum maka narị afọ nke 21”, bụ a na-eduga nnyocha mahadum na 10 kọleji na Korea. Emi odude ke Suwon, banyere 30km n'ebe ndịda nke Seoul, upgrade nwere 14,000 ụmụ akwụkwọ (9,000 Undergraduate, 3,500 gụsịrị akwụkwọ, na 1,500 na ndị ọzọ ọmụmụ).
The ike Ajou si agụmakwụkwọ na programmụ na research idu ke Engineering, IT, biotek, NT, Medical Science, Business na International Studies. Ajou na-ebe ghọtara maka otutu mba na programmụ na ike nkwado maka mba ụmụ akwụkwọ na nwere collaborative mmekorita ya na n'elu 200 mahadum 58 mba. E nwere a dịgasị iche iche nke mba omume na Ajou gụnyere akwụkwọ na ngalaba mgbanwe, mba okpomọkụ akwụkwọ, Korean asụsụ omume, etc. International ụmụ akwụkwọ na-ewere ọmụmụ awa na English site iche iche majors. Kwalite Taa bụ banyere Ịnabata 750 mba ụmụ akwụkwọ a n'afọ.
Division nke International Studies
na 1971, when modernization and industrialization were under way in Korea, Korea and France entered into an agreement for the establishment of Korea-France Technology Junior College in order to exchange technology and culture through education. According to the agreement, Ajou Engineering Junior College, the forerunner of Ajou University, was founded in March 1973 by Yusin Institute established by Park, Chagn-won, the chairman of Yusin Express Tourism Co., Ltd. Starting as Ajou Engineering Junior College, Ajou College recruited 280 students during its first year from four departments, including Electronics, Precision Mechanical Engineering, Fermentation Chemical Engineering, and Industrial Management. The school was promoted to Ajou Engineering College a year later and produced its first graduates in 1997. na 1997, Kim, Woo-jung, the chairman of Daewoo International, contributed his personal wealth to establish Daewoo Institute and took over Ajou University.
Ị chọrọ discuss Ajou University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews